Nbili nke Onye Ozo Mobile Oge A | Martech Zone
Nbili nke Onye Ozo Mobile Nke Oge A
Monday, December 22, 2014 Tọzdee, Disemba 23, 2014 Douglas Karr
Usablenet akwadebewo usoro ihe omuma ohuru nke gosiputara mgbanwe ngwa ngwa nke ekwentị na ụlọ ọrụ njem, site na stats na-ekwu maka ịrị elu nke onye njem ọgbara ọhụrụ, ihe ịtụnanya nsonye nke usoro iguzosi ike n'ihe nke ekwentị nwere ike inwe na ntinye akwụkwọ ugboro ole, otu puku afọ na-ebute ekwentị ụzọ na mkpebi ha na njem.
Usoro zuru ezu gụnyere ihe ndị dị ka:
Narị Afọ Iri na-eduga ụgwọ njem njem mkpanaka: ọtụtụ ndị njem na-agagharị agagharị bụ ndị na-eri ihe n’agbata afọ 25-44. Ha na-etinye, na nkezi, 35% nke oge ha na-achọ ọdịnaya njem na smartphones na mbadamba.
Ntinye ekwentị mkpanaaka aghọwo ihe ndị ahịa na-atụ anya: ntinye akwụkwọ mobile toro 20% na ọkara mbụ nke 2014 ma e jiri ya tụnyere naanị mmụba 2% na ntinye akwụkwọ desktọọpụ.
Otutu bụ isi ihe maka njem ndị ahịa: 40% nke ndị ahịa Expedia na-eji ọtụtụ ngwaọrụ ede akwụkwọ ebe ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọkara nke ndị njem niile na-eme nchọpụta nyocha na echiche njem tupu ha abanye akwụkwọ na ngwaọrụ ọzọ.
Mmemme iguzosi ike n'ihe na-abawanye ohere ndị ahịa na-azụ ụgbọ elu ma ọ bụ ime ụlọ nkwari akụ ruo 86%, yana ihe dịka 50% nke puku afọ ga-atụle mmemme iguzosi ike n'ihe "dị ezigbo mkpa" maka ntinye akwụkwọ.
4 n'ime ndị njem 10 dị njikere ugbu a ịkekọrịta data nkeonwe iji nweta abamuru nkeonwe
Onye njem nke oge a na-ejikọ oge niile ma na-atụ anya ka ahụmịhe mkpanaka na-eme ka njem njem ntinye akwụkwọ dị mfe. Akwụkwọ ọhụrụ e-akwụkwọ njem anyị na-egosi otu ụdị njem ga-esi mepụta ahụmịhe dị egwu maka ndị ahịa n'ofe ekwentị mkpanaka site na ịmekwu ohere na mobile.
Budata eBook site na Usablenet, Onye njem nke oge a na otu ụdị ga-esi jikọọ ha.
Tags: dataExpediaiguzosi ike n'ihe mmemmeọtụtụ puku afọekwentị mkpanaakamobile njemntinye akwụkwọ mkpanakadata nkeonwengosislidesharenjemusablenet
Ahịa na ire ahịa Ugbu a bụ akaụntụ maka 48% nke mmefu ego IT
Kwụsị ịsị na Ntị Ntị na-ebelata, ha abụghị!